သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွင် ဤလက္ခဏာ7ခုကိုတွေ့ပါက၊ အရေးပေါ်ကုသရေးဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးခေါ်ဆိုပါ။
ပင်မစာမျက်နှာခွေးများကိုဂရုစိုက်ပါသင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မှာ ဒီလက္ခဏာ ၇ ချက်ကိုတွေ့ရင် အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ...
ဇန်နဝါရီလ 19, 2022
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ခွေးတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်များ
2. ဒဏ်ရာများ သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများ ကိုက်ခြင်း။
4. အော့အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျှောခြင်း။
7. အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ စားသုံးခြင်း။
သင်ဟာ သားမွေးမိဘအသစ်တစ်ယောက်ဆိုရင်၊ သင်စောစောသိထားသင့်တဲ့အရာတွေက အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပါပဲ။
သေချာတာကတော့ ဒီအခြေအနေတွေမှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိထားရမယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုအရေးကြီးတာက အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲဆိုတာ အရင်လေ့လာရပါမယ်။
အောက်ဖော်ပြပါများသည် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် အရေးပေါ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းစောင့်ရှောက်မှု ချက်ချင်းလိုအပ်နိုင်သည်ဟူသော ပုံပြင်လက္ခဏာအချို့သာဖြစ်သည်။
အချို့သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များက မျက်လုံးနီခြင်းကို မကြာခဏ လက်ခံလေ့ရှိသည်။ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ မျက်လုံးများတွင် အလွန်အမင်းနီခြင်းကို သတိပြုမိပါက ၎င်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးပေးရပါမည်။ အထူးသဖြင့် မျက်လုံးမှ အရည်များ အလွန်အကျွံထွက်လျှင်။
သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၏ မျက်လုံးများတွင် တစ်ခုခုမှားယွင်းနေနိုင်သည်ဟူသော နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏မျက်လုံးများကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်နေချိန် သို့မဟုတ် ကော်ဇောပေါ်တွင် ကုတ်နေချိန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် pug သို့မဟုတ် ထင်ရှားစွာ ထင်ရှားသော မျက်လုံးရှိသော တိရစ္ဆာန်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ချယ်ရီမျက်လုံး ရောင်ရမ်းမှု ပိုများနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ပိုမိုသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖတ်ရန်: ခွေး smegma ကဘာလဲ။ လက္ခဏာများနှင့်ကုသမှု (သင်သိသင့်သောအချက် ၁၀ ချက်)
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ကစားခွင့်ပေးသည့်အခါတိုင်း သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အပေါ် ရန်လိုလာတတ်သည့် အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို သတိထားပါ။
အပျော်အပါးကိုက်တာ မိုက်တယ်။ သို့သော်၊ ၎င်း၏စွမ်းအားကို မထိန်းနိုင်ဘဲ အခြားတိရစ္ဆာန်များကို နာကျင်စေသည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် အမြဲရှိနေသည်။ ပြီးတော့ အဲဒီအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကို စောင့်ကြည့်နေရမယ်။ ချက်ခြင်းမရပ်ပါက ပြင်းထန်သောအကိုက်ခံရခြင်းသည် ပြတ်ထွက်ပြီး ဒဏ်ရာများရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီလိုဖြစ်လာရင် တိရစ္ဆာန်လူနာတင်ယာဉ်ကို ချက်ချင်းခေါ်ပြီး အကူအညီတောင်းပါ။ အထူးသဖြင့် အပြင်မှာနေပြီး ရှေးဦးသူနာပြုစုဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ မရနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့။
အရေးပေါ် ကိရိယာအစုံကို ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်လျှင် အထောက်အကူဖြစ်နေစဉ် သွေးထွက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် သန့်ရှင်းသော ပိတ်စပြား သို့မဟုတ် အဝတ်စဖြင့် ဒဏ်ရာကို ဖိထားပါ။
ဒါက ဉာဏ်မမီပါဘူး။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ဒဏ်ရာရသွားသည်ကို သင်သိရှိပြီးသည်နှင့် သင့်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုသည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် သို့မဟုတ် သင့်အရေးပေါ်တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ထံ ဖုန်းဆက်ရန်ဖြစ်သင့်သည်။
ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းကို သိပါက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် အခြေခံ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းကို သေချာလေ့လာပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် နာကျင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အကူအညီပေးနေစဉ်တွင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဖတ်ရန်: ခွေးများကီဝီသီးစားနိုင်သလား။ - သင်သိရန်လိုအပ်သောအံ့သြဖွယ်အချက် ၁၀ ချက်
ပိုအရေးကြီးတာက မင်းရဲ့ခွေး ဒါမှမဟုတ် ကြောင်တွေကို ပိုသတိထားရမယ်။ ၎င်းတို့သည် ဉာဏ်ကောင်းသည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း ပြင်ပအန္တရာယ်များကို မသိကြသေးသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သေချာဂရုစိုက်ပါ။
ဤနည်းဖြင့် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပေါ်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည် သို့မဟုတ် လျှော့ချနိုင်သည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးဟာ ရုတ်တရက် အော့အန်တာကိုတွေ့ရင် ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ ဝမ်းထဲမှာ ပုံမမှန်ဖြစ်ရင် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှာ တစ်ခုခုမှားနေတာ သေချာပါတယ်။ နောက်ခံအခြေအနေ သို့မဟုတ် ရောဂါကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အချိန်ဆွဲရပါမည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အတူ လျင်မြန်စွာအသက်ရှူမိပါက သို့မဟုတ် ၎င်း၏လျှာ၏အရောင်သည် အပြာ၊ မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် ဖျော့သွားခြင်းရှိမရှိ သင်ပြောပြနိုင်ပါသည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွင် ဤလက္ခဏာများကို သတိပြုမိပါက ချက်ချင်းအကူအညီတောင်းပါ။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကဲ့သို့သော နောက်ခံအခြေအနေကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ ဖုန်းဆက်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ဇယားဆွဲပါ။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ အထူးသဖြင့် ခွေးများသည် ၎င်းတို့လက်လှမ်းမီသမျှကို ဝါးစားချင်ကြသည်ကို သင်သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ရှူရှိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို မျိုချမိခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေများသည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်သည် တစ်ခုခုကို အံကြိတ်နေသည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထံသို့ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ယူဆောင်သွားပါ။ အရေးပေါ်ဆရာဝန် ချက်ချင်း။
ခြစ်စက်တစ်စုံဖြင့် ပြန်ယူနိုင်သည်ဟု သင်ထင်ပါက အရာဝတ္ထုကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။ သို့သော် အရာဝတ္တုကို မမြင်နိုင်လျှင် ကျွမ်းကျင်သူများထံ ထားခဲ့သင့်သည်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဝေးဝေးမှာထားဖို့ သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဆော့ကစားပြီး ဝါးဖို့ စုံစမ်းပါ။
ဖတ်ရန်: ခွေးအစာဝယ်ယူခြင်းလမ်းညွှန်- သင့်ခွေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ သင့်တော်ကြောင်း သိနိုင်မည်နည်း။
အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် ထင်ရှားသောအကြောင်းရင်းများကြောင့် "ကလေးများနှင့်ဝေးဝေးနေရန်" ဟူသော သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များ ပါရှိသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် စားသုံးမိသောအခါတွင် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ လက်လှမ်းမမီစေရန် ရှောင်ကြဉ်ရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အစားအစာအချို့ရှိပါသည်။
၎င်းတို့သည် ထိုနေရာမှ တောင်ဘက်သို့ အမြန်သွားနိုင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ရှောင်ရှားရန် ဤအရာများကို သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားပါ။
ဒါပမေဲ့ (သစ်သားကို ခေါက်ထားပါ) တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီး အကြံဉာဏ်တောင်းပါ။
View Post: 2,362
ယခင်ဆောင်းပါးသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် အကောင်းဆုံး Vet ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။
next ကိုဆောင်းပါးသင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွင် ခွဲခွာခြင်းစိတ်ပူပန်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ (2022)
ခွေးများတွင် Osteoarthritis- လက္ခဏာများနှင့် ကုသမှုရွေးချယ်စရာ ၅ ခု
ဧပြီလ 11, 2022
CareCredit For Pets အကြောင်း သိကောင်းစရာ7ခု (မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း။)
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များ အဆိုအရ အကောင်းဆုံး ခွေးအပူချိန်တိုင်းကိရိယာ ၁၀ ခု (၂၀၂၂)
ဧပြီလ 9, 2022
ခွေးများအတွက် မည်မျှအအေးသည် မည်မျှအေးသည်၊ ဆွေးနွေးရှင်းပြသည် 